Archive du 11-août-2021
Marc Ravalomanana “Vitantsika ny maka io fahefana io”
Nanitrikitrika i Marc Ravalomanana omaly 10 aogositra 2021,nandritra ny fankalazana ny faha-2 taonan’ny RMDM omaly tetsy amin’ny Kianjan’ny Magro Behoririka, nahitana ireo mpikatroka samihafa, olom-boafidy,…
Ho fahagagana sa ho fampiesonana ?
Ho tapitra anio ny fe-potoana 3 andro nomen’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina, fa tsy maintsy hamoahana vahaolana mikasika ny fisondrotry ny vidim-piainana.
Antoko Maitso hasin’i Madagasikara “Miala bala fotsiny ny minisitry ny tontolo iainana”
Miala bala fotsiny ny minisitry ny tontolo iainana ankehitriny, hoy ny avy eo anivon’ny antoko politika Maitso hasin’i Madagasikara tetsy amin’ny La Gastro Pizza Analakely omaly.
Fitaterana eto Antananarivo 30 taona tsy voavaha ny olan’ny fisisihana « bus »
Mampiteny ny moana, mahakivy sy mahavalaketraka, manampy trotraka ny fahasahiranam-bahoaka ny filaharana taksibe eto Antananarivo rehefa hariva firavan’ny mpiasa.
Fifohana cristal amphétamine Olona 7 no voasambotra teny Ankazomanga
Olona miisa fitobe izao no nosamborin’ ny polisy misahana ny ady amin’ny zava-mahadomelina teny Ankazomanga ny Alatsinainy 09 Aogositra lasa teo
Seranan-tsambon’i Toamasina Nanjavona ny fanafody iray kaontenera
Fanafody iray kaontenera nanjavona tao amin’ny seranan-tsambo any Toamasina, araka ny fampilazana fahaverezana entana nataon’ny Office Pharmaceutique Malgache na OPHAM,
Ambohimanarina Nidoboka eny Antanimora ireo mpamaky fiara
Lehilahy miisa roa 44 sy 48 taona no tra-tehaka teny Ambohimanarina teo am-pamakiana fiara sy naka ireo kojakoja (auto-radio, pièces hafa) tao anatiny ny faran’ny herinandro teo .
Dr Fidy Bariniaina “Tsy azo lavina ny hoe mety efa eto ny Delta”
Voamarina fa PIC na fidinan’ny tarehimariky ny Covid 19 no nitranga nanomboka ny volana jolay teo, hoy ny dokotera Fidy Bariniaina, nanamarina ny voalazan’ny filoham-pirenena ny alahady teo.
Fiangonana FJKM Mety hafampana ny Synoda Lehibe faha-19
Fotoan-dehibe ho an’ny Fiangonan’i Jesosy Kristy eto Madagasikara na ny FJKM ity herinandro ity.
Jean Jacques Ratsietison « Ny fahaizana manao fifanarahana no mampandroso »
Tsy misy izany fanararaotana izany fa ny sandam-bola Malagasy no nidina be, hoy ny mpahaitoekarena sady filohan’ny antoko politika Fahefa-mividy izao no ilain’ny Malagasy, Jean Jacques Ratsietison.
Fifidianana an-dRajoelina “Nanenina tongotra aman-tànana ny any Atsimo”
Nahitsy ny Filoha Lefitry ny RMDM avy amin’ny Faritanin’I Toliara Atoa Sahazalahy Tsianihy omaly, raha nanontaniana momba ny fiainam-bahoaka sy ny toe-draharaha any Atsimo omaly,
Fifanarahana tamin’Ambatovy sy QMM Namaly ny kiana nataon-dRajoelina i Ravalomanana
Nanenjika sy nanakiana ankolaka an’I Marc Ravalomanana Filoha teo aloha hatrany ny Filoha ankehitriny Andry Rajoelina tamin’ny fifanarahana nahafahan’ireo orinasa lehibe mpitrandraka harena an-kibon’ny tany ny ny
Tolom-bahoaka sy fanonganam-panjakana Tsy nisy nahitam-bokany tsara\_ teto, hoy ny FEDEP
Nivoaka tamin’ny fahanginana indray ny FEDEP omaly notarihin-dRakotomalala Henri na Riribe , mpitarika ny gadra politika sy ny kolonely Behavana Jean Badpiste.
Mgr Odon Razanakolona Handeha hisotro ronona, andrasana ny hevitry ny Papa
Miandry ny fanapahan-kevitry ny Papa amin'ny fisotroan-dronono ho an’ny Arsevekan’Antananarivo Monsenera Odon Razanakolona,
Pr René Rasolofo “Handefasan’olona satroka manga angamba isika vao hanenina”
Vao tonga alina (TTF: alin’ny alatsinainy teo) teto Antananarivo aho, hoy ny Pr René Rasolofo, filozofa sy mpanao politika. 200 km ny elanelan’Antsiranana sy Antananarivo, hoy izy.
Tabera Randriamanantsoa “Hararaotin’ny vazaha ny tsy firaisankinantsika”
Fantatry ny olona fa tsy manampahefana hanapa-kevitra avy any ambony ireo minisitrantsika, hoy ny filohan’ny antoko politika Kintana sady filohan’ny “Comité pour la reconciliation nationale” na CRN,
Amboanana Arivonimamo Mbola tsy voalevina rangahy dia maty indray ny vadiny
Faty roa no tsy maintsy indray hiara-hiditra ny fasana raha tsy maintsy tsaboina koa ireo naratra. Mpivady izy ireo ka ilay Ramatoa no nialoha lalana voalohany.
Raharaha Clémence Raharinirina Amin’ny 17 aogositra ny didim-pitsarana
Misaotra an'Andriamanitra lehibe fa vita soamantsara ny fitsarana ahy androany, hoy ny mpanolontsain’ny tananan’Antananarivo, Clémence Raharinirina, omaly.
FJKM Imerintsiafindra Fiderana Rindra-kira lehibe iarahana amin’ny Koraïta ny alahady izao
Mankalaza ny jobily faha-135 taonany ny Fiangonana FJKM Imerintsiafindra Fiderana. Nanomboka ny 2020 ny fankalazana, fa tsy vita noho ny fihibohana, ka notohizana amin’ity taona ity.
Mpitsabo Malagasy FITRAMA Rariny sy hitsiny ny ataon’ny ministera
Tafiditra ao anatin’ny lalàna mifehy ny mpitsabo nentim-paharazana ny tsy fahafahana na fahazoan’izy ireny manao dokam-barotra.